साफ च्याम्पियनसिपः नेपाल र बंगलादेश भिड्दै, अग्निपरीक्षामा पास होला नेपाल ? - Everest Dainik - News from Nepal
साफ च्याम्पियनसिपः नेपाल र बंगलादेश भिड्दै, अग्निपरीक्षामा पास होला नेपाल ?
काठमाडौं, भदौ २३ । साफ च्याम्पियनसिपअन्तर्गत शनिबार अपराह्न बङ्गलादेशको ढाकास्थित बङगबन्धु रङ्गशालामा हुने समूह चरणको अन्तिम खेल जित्न सके नेपाल सेमिफाइनलमा प्रवेश गर्नेछ ।
समूह चरणको पहिलो खेल गुमाए पनि दोस्रो खेलमा उत्कृष्ट पुनरागमन गरेको नेपालका लागि शनिबारको खेल अग्निपरीक्षा बराबर हो । जारी प्रतियोगितामा बङ्गलादेशले तीन गोल गरेको छ भने एक गोल पनि खाएको छैन । नेपालले भने पाँच गोल गर्दा दुई गोल खाएको छ । यसरी हेर्दा बङ्गलादेशविरुद्ध गोल गर्न निकै कठिन देखिन्छ ।
शुक्रबार बिहान ढाकामा सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै नेपाली राष्ट्रिय फुटबल टोलीका कप्तान विराज महर्जनले शनिबार हुने बङ्गलादेश विरुद्धको खेल नेपालले जित्नै पर्ने बताए । कप्तान महर्जनले साफ च्याम्पियनसीप अन्तर्गत समूह चरणको तेस्रो खेल खेलाडीका लागि मात्र नभएर सम्पूर्ण नेपालीका लागि महत्वपूर्ण रहेको बताएको अखिल नेपाल फुटबल सङ्घ (एन्फा) ले जनाएको छ ।
याे पनि पढ्नुस कतारसँग नेपाल ५ गोलले पराजित, समूह चरणबाटै बाहिरियो
ट्याग्स: Nepal Vs Bangldesh, Nepali Football Team, साफ च्याम्पियनसिप